China Anchoring Mwekota na ezé C ahu PA04,07,09 Nlụpụta na Factory | MGBE
ADSS USB mwekota nke ADSS cable mwekota na eriri ọgụgụ nke 8 nke eriri arịlịka ADC cable ka e mere eriri ...
Nkọwa nke eriri ADSS
ADSS eriri mwekota maka ADSS USB na gburugburu ọgụgụ 8. eduzi. ADSS eriri mwekota na-emi esịnede a ahu, wedges na mbughari na kemeghi mgbapụta ma ọ bụ mpe mpe akwa. Otu isi adss wedge clamp bụ iji kwado onye na-anọpụ iche, wedge ahụ nwere ike ịgbanwe onwe ya. Pilot wires ma ọ bụ n'okporo ámá ọkụ na-eduzi na-ada n'akụkụ USB mwekota maka ADSS USB. Emepụtara oghere onwe site na njikọta ihe eji eme mmiri maka itinye onye na-eduzi ya n'ime ngwa ngwa. Ọkọlọtọ: NFC 33-042.
Ihe njigide ihe nkedo maka eriri ADSS
Ihe nkedo a na - ejide ADSS eriri ahụ, a na - arụpụta ihe mejupụtara ya na nnukwu ọrụ ihu igwe na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ ihu igwe. Maka ị na-ejikọta eriri dị iche iche na coiial na ndị na-adịghị ahụkebe.
Njirimara nke eriri igwe maka eriri ADSS
Maka ziri ezi wụnye ADSS eriri mwekota, ndị na-esonụ na-atụ aro:
Dị PA04-S120M PA07-S (*) M PA09-S250M
USB dayameta (mm) 3 ~ 6 3 ~ 7 7 ~ 9
(*) Tinye L (mm) na ụdị Maka figengered Fig-8 USB, AAAC ma ọ bụ Steel Fiber iko mesikwuru resin; Gburugburu ADSSIke ọdụdọ dị ka eriri